मेरो जागरण मेरो जीवन भाग -१ ( बज्रपात ) - Jagaran Post
जागरणपोस्ट १४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १५:१३
अम्बिका कार्की `अमु´ :
२०५६ साल बैशाख महिनाको कुरा हो । मेरो जिवनमा ठुलै बज्रपात पर्‍यो । जनयुद्धको एउटा चपेटाले मेरो जिन्दगीलाई नराम्रो सँग हिर्कायो ।मेरा सपनाहरू एकाएक झर्‍याम्म फुटे जस्तोकी सिसाको महलमा कसैले पत्थर हाने जस्तो । जस्तो कि हरियो बिरुवाको जरा काटिदिए जस्तो । यो देशमा गणतन्त्र भित्र्याउनका लागि मैले ठूलो मूल्य यसरी तिरेको छु बर्षौं अघि घर धितो राखेर साहुबाट ऋण लिएको कागजको म्याद सकिएर सो धन साहुले कब्जा गरेपछि आफू रित्तिए जस्तो ।हजारौं सपनाहरूको महल बनाउँदै गर्दा जिन्दगीबाट जिन्दगी चुडेर लगेपछि बाँकी केनै रह्ह्यो र? यसको मूल्य नत सरकारले तिर्न सक्छ न भगवानले ।
हामी आजपनि यही समाजमा छौं जहाँ परिवर्तनको खोल ओडेर भित्र रुढिबादी संस्कार नै काखी च्यापेर मरेको बिरालो काखी च्यापेर ठिमी तिर उक्ले जस्तो उक्लिदैछ परिवर्तनको संघार तिर । म जस्तै सानो उमेरमा एकल भएका अम्बिकाहरू आजपनी घर परिवार र आफन्तको तिरस्कार बाट आधारातमा आफ्नो मान्छेको तस्बिर छातिमा टाँसेर रुन बाध्य छन् । कयौं अम्बिकाहरू डटेर प्रतिकार गरिरहेका छन् । मलाई त्यतीबेलाको घटनाले चुम्बकले फलामलाई ताने जस्तै गरेर घरिघरि तान्छ ।सम्झन्छु ती दिन जुन दिनले मलाई संघर्षको मैदानमा उतारेर छोड्यो । आँगनमा पतिको लास थियो । कसैले मुटुनै झिकेर लगे जस्तो । कसैले बजिरहेको सारङ्गिको तार चुडाइदिए जस्तो म बाँच्न कल्पना पनि गर्दनथें । त्यतिबेलाको त्यो क्षणबाट मैले यो समाजसँगको लडाइँ सुरु गरेकी हुँ ।एक कुनामा म थिएँ दुनिया अर्कोतिर थियो तपाईलाई अनौठो लाग्नसक्छ बलेको आगो ताप्ने चलन आजको होइन निकै अघिदेखी नै हो । म अब निभी सकेको थिएँ त्यतिबेला कसैले भन्यो १९/२० बर्षकि छे त्यसले त पोइ पाइहाल्छे नि हेर बिचरा धेरै दुखले दुख मेटाउन पुलिसमा भर्ती भएको थियो सधैंलाई दुख मेट्यो डुंगाले पाइला मेटाए जस्तो । यही नै थियो हाम्रो समाजको यथार्थ औकात आखिर आफ्नै स्थानमा उभियो म माथी त्यो पहाड खसेका बेला पनि ।त्यस दिनबाट बोक्न सुरु भएको मेरो जिवनमा भारी थाहा छैन कहिलेसम्म बोक्नु पर्ने हो तर साहस अझै एक भकारी त टालेर राखेकी छु । कुनैदिन कमजोर बनेछु भने काम दिनेछ । मैले मेरो कहानी जोड्नुको तात्पर्य हो हाम्रो समाज परिवर्तन छैन हजुर कमसेकम यो मानिदिनुस खोल ओढेर कतिन्जेल बस्नुहुन्छ? कोहि घरबाट निस्केर बाहिर कतै जान लाग्दा जम्काभेट हुँदा समेत कु साइत बनेकी त्यही अलच्छिनी अम्बिकाले कु साइत भयो भन्नेहरूकै सलाम वाला चाप्लुसी भेट्ने गरेकी छ । यो समाज परिवर्तन होइन महोदय अम्बिकाको संघर्षको प्रतिफल हो ।म रोएर त्यही कुनामा बस्थें भनें सधैभरी त्यही दर्जा बोकिरहनु पर्थ्यो ।आम एकल दिदी बहिनीलाई यही भन्न चाहन्छु तपाईले प्रतिकारको क्षमता बढाउनुस तपाइले आफू सही ठाउँमा बसेर अन्याय सँगको लडाइ लड्नु भो भने एकदिन त्यो सार्थक हुनेछ । हिजो अलच्छिनी भन्नेहरू आज वाह तेरो साहस भनेर पुजा गर्न थाल्नेछन ।
मेरो जागरण मेरो जीवनअन्तर्गत चितवनकी स्रष्टा अम्बिका कार्की `अमु´ को जिवनकथा भाग-१ देखि प्रकाशन हुन शुरु भएको छ।
तपाईंहरुसंग पनि यस्तै जीवन भोगाईका स्मरणहरु छन भने हामीलाई लेखीपठाऊनुहोस, हामी तपाईंका जीवन भोगाईलाई निरन्तर मेरो जागरण मेरो जीवनमा प्रकाशित गर्नेछौं। आफ्ना जीवन भोगाईहरुको संगालोलाई jagaranpost.com@gmail.com
या jagaranpost@gmail.com मा लेखिपठाऊनुहुन अनुरोध छ।